Speedtest MY-IP-IS.com - Hubi xawaaraha internetka ee internetka
Xawaaraha MY IP IS
Maxuu baaritaankaan kuu sheegi doonaa?
Waxaad tijaabin doontaa isku-xidhka Internet-kaaga si aad u hesho fikrad guud oo ku saabsan kartidaada iyo xawaarahaaga. Si gaar ah u akhri, akhristayaasha aad heshay waa xawaaraha download, xawaaraha iyo latency.
Tani waa sida ugu fiican ee muusikada, sawirada iyo fiidiyowga, ama macluumaadka ka socda websaydh ama ilo kale oo internetka ah ee kombiyuutarkaaga.
Tani waa soo horjeeda. Tani waxay kuu sheegaysaa sida sawirada ama faylasha si wax ku ool ah looga wareejiyo kombuyuutarkaaga ilaa goob kale, sida sawir qaadida shabakadda bulshada.
Sidoo kale loo yaqaan heerka ping, lambarkan wuxuu u dhigma wakhtiga dib u dhaca internetka lagu qiyaaso milliseconds. Tirada ka sii badan, dib u dhac aad u badan oo aad la kulantay oo aad dareemi karto intaad internetka ku jirto. Haddii aad ciyaareyso ciyaaraha internetka, gaar ahaan kuwa ugu horeeya ee toogashada ama ciyaaraha gawaarida, markaa waxaad rabtaa inay qarsoodi ka yaraato 30ms. Inta kale ee naga mid ah, wax kasta oo ka hooseeya 100ms waxay noqon laheyd fiicnaan. Xaaladaha degdega ah, laakiin ... Waxaa jira dhowr arrimood oo saameyn kara xawaaraha xariirka internetka waqti kasta, marka laga reebo nooca xiriirka aad leedahay, sida cable ama DSL. Haddii dad badan oo ku nool hal guri ay yihiin isla waqti isku mid ah, ciyaaraha ciyaaraha iyo fidinta muusikada ama fiidiyowyada, xidhiidhka internetku wuu yaraan karaa. Sidoo kale, da'da kombiyuutarkaaga ama modemku waxay noqon kartaa arrin, sababtoo ah tiknoolajiyadu si joogto ah ayey u fiicnayd. Weli, haddii aadan ku faraxsanayn xawaaraha caadiga ah (ama hoos u dhaca) ee xiriirintaada internetka, la hadal adeeg bixiyahaaga oo arag waxa ay soo jeedinayaan. U hubso inaad hesho talooyinkooda ku saabsan hagaajinta xawaaraha adiga oo aan hagaajin adeega.
IP-ga ayaa laga heli karaa: Afrikaans Albaaniyaan Amharic Carabi Armenia Azerbaijan Basque Belarus Bengali Boosniya Bulgaria Catalan Sugbaano Jicewa Chinese (La fududeeyay) Chinese (dhaqanka) Korisikan Croatian Czech deenishka, Holland Isberento Istooniyaan Filibiin Finland Faransiiska Frisian Galician Joorijiyaan Jarmal Greek Gujarati Creole Haitian Hausa Hawaiian Cibraaniga Hindi Hmong Hungary Iceland Igbo Indonesia Irish Talyaani Japan Jafaniis Kannada Kazakhstan Khmer Kuuriyaan Kurdish (Farsiga) Kyrgyz Lao Laatiin Latvia Lithuania Laksambargish Makedoniya malagasy Malay Malayalam Malta Maori Maarati Mongoliyaan Myanmar (Burma) Nepal Norway Pashto iiraani dhalaalin Portugal Punjabi Romania Ruush Samoan Scottish Gaelic Serbian sesooto Shona Sindhi Sinhaala Slovakia Slovenia somali Spain Sudan Sawaaxili iswiidishka Tajik Tamil Telugu Thailand turkish Ukraine Urdu Usbeek Vietnamese Welsh Xhosa Yadhish Yoruba Zulu